Pinegrow: Umhleli weDesktop omangalisayo ngokudityaniswa kweWordPress | Martech Zone
Andinyanisekanga ukuba andikaze ndibone umhleli wekhowudi emhle ngakumbi kwintengiso kune I-Pinegrow. Umhleli ubonelela hlela-ngaphakathi ukusebenza kunye nokujonga kwangaphambili kwexesha lokuphendula. Eyona nto ilunge kakhulu, I-Pinegrow ayongezi naziphi na izikhokelo, ubeko okanye izitayile kwikhowudi yakho.
Ezinye zeempawu eziphambili ze I-Pinegrow:
Ukuhlela Yongeza, hlela, hambisa, cofa okanye ucime izinto ze-HTML.
Isikhokelo Inkxaso yeBootstrap, iSiseko, iAngularJS, iigridi ezingama-960 okanye i-HTML.
Ukuhlelwa kwamaphepha amaninzi -Hlela amaphepha amaninzi ngaxeshanye. Phinda iikopi kunye namaphepha esipili-nangamanqanaba okusondeza ahlukeneyo kunye nobukhulu bezixhobo.
Umhleli weCSS -Hlela imigaqo yeCSS ngokubonakalayo okanye ngekhowudi. Sebenzisa umphathi wesimbo sokubhala ukuze uncamathele, uncamathisele kwaye ususe isheetheet.
Ukuhlelwa kwewebhu -Faka i-URL kwaye uhlele amaphepha akude: tshintsha ubeko, uhlele umbhalo kunye nemifanekiso, uguqule imigaqo yeCSS.
Ubeko oluphendulayo -Yila ubeko oluphendulayo ngesixhobo semibuzo esincedayo seMedia. Yongeza iindawo zokuqhekeka kwesiko okanye uvumele iPinegrow ukuba ibabone ngokuhlalutya istayile.
Eyona nto imangalisayo, iPinegrow ine-WordPress yokongeza ekuvumela ukuba ufake izinto zeWordPress kwaye ubonise owona mxholo. Eli linqaku elihle elipholileyo kwabo baphuhlisayo okanye abahlela imixholo yeWordPress.
tags: umhleli we khowudihlela-ngaphakathiphp umhleliipinegrowUmhleli womxholo wegamalwenshya
URodrigo Ribeiro de Abreu (uMilano)
Okt 29, 2015 ngexesha 10:09 AM
Ndisebenzisa iPinegrow ekuhambeni kwam komsebenzi kwaye ngoku ndisebenza nge-2x ngokukhawuleza. Okanye nangaphezulu.
Meyi 28, 2017 kwi-4: 48 PM
Uthando lwePinegrow. Ndifumene nezinye iiplagi zasimahla onokuzikhuphela apha https://pluginsforpinegrow.com